Ngwá ọrụ 8 maka Influencer Marketing Research dị mkpa na niche gị | Martech Zone
Ụwa na-agbanwe mgbe niile na ahịa na-agbanwe na ya. Maka ndị na-ere ahịa, mmepe a bụ mkpụrụ ego dị n'akụkụ abụọ. N'otu aka, ọ na-atọ ụtọ ka ị na-aga n'ihu ahia ahia na iwepụta echiche ọhụrụ.
N'aka nke ọzọ, ka ọtụtụ ebe nke ahịa na-ebilite, ndị na-ere ahịa na-emewanyewanye ihe - anyị kwesịrị ijikwa usoro ahịa ahịa, ọdịnaya, SEO, akwụkwọ akụkọ, mgbasa ozi mgbasa ozi, na-ebupụta mkpọsa okike, na ihe ndị ọzọ. Ọ dabara nke ọma, anyị nwere ngwa ahịa iji nyere anyị aka, chekwaa oge, na nyochaa data anyị agaghị enwe ike ma ọ bụghị ya.
Ịre ahịa mmetụta abụghị ihe ọhụrụ - ka ọ dị ugbu a, ọ bụ ụzọ guzosiri ike na nke a pụrụ ịdabere na ya iji bulie gị elu mara amara ma weta ndị ahịa ọhụrụ.
75% nke ụdị ezubere ịrara ego dị iche iche maka ịzụ ahịa influencer na 2021. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, afọ 5 gara aga mere ka ahịa influencer dịkwuo maka obere ụdị, mana n'otu oge ahụ dị mgbagwoju anya na mgbanwe.
Hub Influencer Hub
Ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla nwere ike ịkwalite site na ịzụ ahịa influencer mana ndị na-ere ahịa na-eche ihe ịma aka ọhụrụ ihu na ndị na-eme ihe. Ha chọrọ ịma ka esi achọta onye okike zuru oke maka akara ha, otu esi elele ma ọ bụrụ na ha na-azụta ndị na-eso ụzọ na ntinye aka, yana otu esi achọpụta na mkpọsa ha ga-adị irè.
Ọ dabara nke ọma, enwere ngwa ahịa na-enyere gị aka ịchọta ndị na-eme ihe kacha mma maka niche gị na onyonyo ika gị, nyochaa ụdị iru ị ga-atụ anya site na imekọ ihe na ha, wee nyochaa mkpọsa mmetụta gị ozugbo ọ gwụchara.
N'isiokwu a, anyị ga-ekpuchi ngwaọrụ 7 maka mmefu ego na ihe mgbaru ọsọ dị iche iche. Ị nwere ike ịhọrọ nke dabara gị mma ma chekwaa oge na nyocha ahịa influencer.
Awario na-enyere ndị azụmaahịa na ndị na-ere ahịa aka ịchọta obere na nnukwu mmetụta na niche gị.
Awario bụ ngwá ọrụ dị ukwuu maka ịchọta ụdị mmetụta ọ bụla, nnukwu ma ọ bụ obere, niche ma ọ bụ isi. Uru ya bụ mgbanwe - ị nweghị usoro nhazi nke ị na-achọgharị maka ndị na-eme ihe dị ka ọtụtụ ngwa ahịa ndị ọzọ na-emetụta mmetụta.
Kama, ị na-emepụta ihe nleba anya mgbasa ozi mgbasa ozi na-enye gị ohere ịchọ ndị na-eme ihe na-ekwu maka mkpụrụokwu akọwapụtara (ma ọ bụ iji ha na bios ha, wdg). Isi okwu ndị a nwere ike ịbụ ụdị aha dị iche iche na niche gị, ndị asọmpi gị kpọmkwem, ụdị ngwaahịa ị na-emepụta, yana okwu metụtara ụlọ ọrụ - njedebe bụ echiche gị.
Wepụta obere oge chee echiche banyere ụdị onye na-emetụta ihe ịchọrọ ịchọta yana nkebiokwu ndị ha ga-eji na nkọwapụta na edemede ha.
Awario na-anakọta mkparịta ụka ịntanetị na-ekwu maka mkpụrụokwu ndị a wee nyochaa ha maka iru, mmetụta, yana ụyọkọ igwe mmadụ na metrics. A na-agbakwunye ndị na-ede akwụkwọ nwere ike iru na ọkwa ha na akụkọ mmetụta.
Akụkọ ahụ na-egosi gị ndị na-eme ihe na-emebi site na ikpo okwu (Twitter, YouTube, na ndị ọzọ) site na iru ha, ugboro ole ha kwuru okwu gị, yana mmetụta ha kwupụtara. Ị nwere ike inyocha ndepụta a wee chọta ndị okike dabara adaba. Enwere ike ịkekọrịta akụkọ ahụ n'ụzọ dị mfe site na igwe ojii ma ọ bụ PDF gị na ndị ọrụ ibe gị na ndị otu gị.
Ọ bụrụ na ị na-achọ onye mmetụta nwere otu iru eru (dịka ọmụmaatụ, 100-150 puku ndị na-eso ụzọ), ị nwere ike ịhụ ha na ndepụta ndepụta. Enwere panel nzacha dị mma nke na-enye gị ohere iji ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ nyochaa akaụntụ. Ị nwere ike nzacha data a site na mmetụta, obodo, na ndị ọzọ.
Ekwesịrị ikwu na Awario abụghị naanị ngwa ahịa influencer na ọ na-enye ọtụtụ nghọta ahịa bara uru maka nyocha asọmpi, atụmatụ mkpọsa, na nlekota mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ị ga-anwale Awario ma ọ bụrụ:
Ị nwere ihe achọrọ maka ndị na-eme ihe n'uche
Ịchọrọ ime laser-chekwaa mkpọsa mmetụta gị
Ịchọrọ ngwá ọrụ nwere ọtụtụ ebumnuche nke nwere ike ikpuchi karịa ahịa influencer
Awario na-enye nnwale ụbọchị 7 n'efu nke ị nwere ike iji nwalee ya Ndị na-emetụta mmetụta na-akọ.
Banye maka Awario
Ọnụ ahịa na-amalite na 39 $ kwa ọnwa (24$ ma ọ bụrụ na ịzụrụ atụmatụ ogologo afọ) ma dabere na mkparịta ụka ole ngwá ọrụ nwere ike ịnakọta na nyochaa.
Upfluence bụ nchekwa data mmetụta kacha mma maka ụdị azụmaahịa E-azụmahịa. Imirikiti ngwa ahịa influencer dabere na ọdụ data - katalọgụ nke influencers ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Upfluence bụ ọganihu ebumpụta ụwa nke echiche a. Ọ bụ nnukwu nchekwa data dị n'ịntanetị nke ndị na-eme ihe na-emelite ma gbasaa site na algọridim na-enyocha profaịlụ nke ndị okike gafee ọtụtụ nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta.
Ọzọkwa, ị na-eji mkpụrụokwu iji chọọ ndị okike, mana oge a ngwa ọrụ anaghị ebido nchọ ọhụrụ site na ọkọ. Kama, ọ na-agbakọ site na nchekwa data ya iji chọta profaịlụ ndị nwere mkpado dị mkpa jikọtara na mkpụrụokwu gị. Ihe na-ekewa Upfluence na ọdụ data influencer ndị ọzọ bụ ikike inye ibu na mkpụrụokwu dị iche iche.
Dịka ọmụmaatụ, ị na-achọ onye na-eme ihe n'ụzọ ndụ iji kwalite ngwa ụlọ gị ejiri ụkpụrụ omume mee. Ị nwere ike ime ụlọ mma na ime ime isi okwu wee họrọ ụkpụrụ, obere azụmahịa, nke ụmụ nwanyị nwe dị ka nke abụọ Keywords. Ha ga-adị mkpa maka ọchụchọ gị, mana ha agaghị arụ ọrụ dị ka isi okwu gị.
Ọ bụrụ na isi ikpo okwu gị bụ Instagram, ị ga-enwe ike nzacha ndị na-emetụta ya dabere na igwe mmadụ dị ka afọ, okike na ọnọdụ (ọ bụrụ na ndị na-eme ihe ngosi gosipụtara ikike ịnweta data a).
Ụlọ ahịa e-azụmahịa ga-enwe ike nweta uru karịa site na ngwá ọrụ na-achọta mmetụta n'etiti ndị ahịa ha dị ugbu a. Enwere ike ijikọ nkwalite na CMR gị na ebe nrụọrụ weebụ iji chọpụta ndị ahịa nwere ọtụtụ ndị na-eso ụzọ mgbasa ozi. Cheta, ndị ahịa gị na-abụkarị ndị ahịa gị kacha mma, ma ọ bụrụ na ha nwere ndị na-ege ntị nke onwe ha, ọ ga-abụ ihe na-adịghị mma ileghara ha anya.
Na mgbakwunye na nchọta influencer, Upfluence na-enye nchekwa data nwere ike ịhazi ebe ị nwere ike ịhazi ndị na-emetụta mmasị. Ị nwere ike tinye ubi wee hapụ mkpado ka ịchọta ndị gị na ha na-emekọ ihe dị mfe. Na mgbakwunye, ị nwere ike jikọọ akwụkwọ ozi email niile dị n'etiti gị na onye na-eme ihe maka ntụnye aka dị mfe. Enwekwara akụrụngwa njikwa ndụ nke na-egosi gị ọganihu gị maka onye ọ bụla na-eme ihe - onye gị na ya na-akpakọrịta, onye ị na-eche ka ọ mezue ọdịnaya, onye na-echere ịkwụ ụgwọ, ụdị ihe ndị ahụ.
N'ihe niile, Upfluence na-elekwasị anya n'ịkwado mmekọrịta dị ogologo oge n'etiti ụdị na ndị na-eme ihe, ya mere ha na-elekwasị anya ọ bụghị naanị na nchọpụta mmetụta kama nkwurịta okwu na njikọ.
Ị ga-anwale Upfluence ma ọ bụrụ:
Na-arụ ọrụ na e-commerce na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
Chọrọ ikpo okwu ahịa influencer maka ọchụchọ na njikwa
Ebumnuche wulite mmekọrịta dị ogologo oge na ndị na-eme ihe
Upfluence bụ ikpo okwu nke ụlọ ọrụ. Ọ na-enye ọnụahịa ziri ezi na kọntaktị mgbe ndị njikwa ha nwesịrị ike ịchọpụta mkpa gị. Enwere atụmatụ atọrọ atọ dị iche iche site na ọnụọgụ ndị ọrụ yana ịnweta akụkọ na njikọta.
Malite na nkwalite
Enwere ndọtị Chrome n'efu iji nyochaa profaịlụ onye mmetụta ngwa ngwa.
Ọ bụ ezie na BuzzSumo abụghị ngwa ahịa azụmaahịa influencer, ọ na-enye ndị ọrụ ya ohere ịchọpụta ọdịnaya ịntanetị kachasị ewu ewu wee nyochaa ndị dere ya n'azụ. Ya mere, ọ nwere ike ịbụ ụzọ dị ịtụnanya ịchọta ndị na-eme ihe nkiri nke ọdịnaya ha na-enweta ọtụtụ ntinye aka na ya mere ndị nwere ndị na-ege ntị na-eguzosi ike n'ihe na ndị na-arụsi ọrụ ike.
Ọchịchọ na BuzzSumo daberekwa na mkpụrụokwu. Ị nwekwara ike họrọ ihe nzacha ga-emetụta nchọ gị gụnyere ụbọchị, asụsụ, obodo na ihe ndị ọzọ. A ga-ahọpụta nsonaazụ ya site n'ọnụọgụ njikọ aka ha wepụtara - mmasị, oke, na nkwupụta. Ị nwere ike nyochaa ndị dere akwụkwọ ndị a ka ị ghọta nke n'ime ha bụ mgbasa ozi nje sitere na ndị na-ahụ maka mgbasa ozi oge niile, na nke ndị na-eme ihe na-emepụta na-emepụta, wee ruo na nke ikpeazụ.
Njirimara Buzsummo's Trending Now bụkwa ngwa bara uru nke na-enye gị ohere ịnọ n'elu usoro kachasị ọhụrụ na ụlọ ọrụ anyị. Naanị ihe ị ga - eme bụ imepụta isiokwu ahaziri ahazi na-akọwa niche gị na ngwanrọ ahụ ga-egosi gị ọdịnaya na-ewu ewu na niche a. Ọ bụ ọmarịcha njirimara ịchọta ndị okike na-apụta n'ọhịa gị.
Ikpo okwu na-enyekwa nchọta Influencer kwụ ọtọ, ọ bụ ezie na ọ nwere ntakịrị ntụgharị na ya. Atụmatụ ndị ode akwụkwọ kacha elu nke BuzzSumo na-ekewa ndị na-eme ihe n'ime ụdị ndị a:
Ndị mmadụ mgbe niile
Ị nwere ike họrọ ọtụtụ edemede ka ịchọọ. Ọchịchọ a dabere na mkpụrụokwu metụtara niche ị nyere. Nsonaazụ na-enye gị ọtụtụ ozi na ndị edemede gụnyere ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ ha n'ofe nyiwe, ebe nrụọrụ weebụ ha (ọ bụrụ na ha nwere otu) na ikike ngalaba ya, mkpa, na ndị ọzọ.
Ị ga-anwale BuzzSumo ma ọ bụrụ:
Ị na-achọ ndị na-ede blọgụ
Enwere atụmatụ efu nke na-enye gị nyocha 10 kwa ọnwa, Otú ọ dị, a naghị agụnye ọchụchọ ndị kachasị elu. Ị nwekwara ike ịnwale atụmatụ ọ bụla n'efu maka ụbọchị 30.
Bido nnwale ụbọchị 30 efu nke BuzzSumo
Ọnụ ahịa na-amalite na $99 kwa ọnwa ma dị iche iche dabere na njirimara dị. Njirimara ndị ode akwụkwọ kacha dị naanị na nnukwu atụmatụ nke na-ere $299 kwa ọnwa.
Heepsy na-enyere gị aka ịchọ na nyocha ọtụtụ nde Instagram, YouTube, TikTok na Twitch. Ihe nzacha ọchụchọ Heepsy na-enyere gị aka ịchọta kpọmkwem ihe ị na-achọ, na akụkọ mmetụta anyị na-enye gị metrik ịchọrọ ịme mkpebi. Ikpo okwu gụnyere metrik arụmọrụ ọdịnaya yana nyocha ndị na-eso ụzọ adịgboroja.
Ị ga-anwale Heepsy ma ọ bụrụ:
Ọdịnaya gị na-abụkarị ihe a na-ahụ anya na ị na-achọ ndị okike vidiyo.
Ịchọrọ soro njikọ aka ọdịnaya na isi isiokwu.
Ịchọrọ imetụta ndị na-eso ụzọ na Instagram, YouTube, TikTok na Twitch.
Ọnụ ahịa na-amalite na $49 kwa ọnwa na oke ikike. Ha na-enyekwa ngwugwu azụmahịa na ọla edo.
Nchu.io na-achọta adreesị ozi-e maka gị. Ị nwere ike ịme nyocha 100 kwa ọnwa na atụmatụ efu. Ị tinye ngalaba aha n'ime search engine ha na Hunter.io ga-eme ike ya niile ịchọta adreesị ozi-e ndị agbakwunyere na ngalaba ahụ.
Hunter.io nwere ike inye aka karịsịa maka ịchọta adreesị ozi-e nke ndị nwere ike ịba uru na nzukọ gị. Dịka ọmụmaatụ, dịka akụkụ nke mgbasa ozi mmetụta gị, ị nwere ike ịrịọ maka ntinye blọgụ ndị ọbịa na blọọgụ nwere mmetụta na niche gị. Ọ nwere ike isi ike mgbe ụfọdụ ịchọta adreesị ozi-e ziri ezi mgbe ịchọrọ iji arịrịọ gị bịakwute ha. Ị nwere ike tinye aha mmadụ na webụsaịtị ụlọ ọrụ n'ime Hunter.io, ọ ga-eji adreesị ozi-e atụpụtara.
Ọ bụrụ na ị chere na ị nwere adreesị ozi-e ziri ezi iji sochie ma ị maghị, ị nwere ike tinye adreesị na Hunter.io, ọ ga-ekpebi ma adreesị ozi-e ahụ ọ̀ dị irè.
Ị nwekwara ike iji Hunter.io dị ka nkwụnye. N'okwu a, mgbe ị na-aga na otu webụsaịtị ị nwere ike pịa akara ngosi Hunter.io na ihe nchọgharị gị, ọ ga-ahụkwa adreesị ozi-e ọ bụla dabara na mpaghara ahụ.
Ị ga-anwale Hunter.io ma ọ bụrụ:
Ị nweelarị ndepụta ndị na-eso ụzọ ịchọrọ iru
Ị nọ na usoro ịmepụta nchekwa data nkeonwe nke ndị na-eme ihe na niche gị
Ụdị efu ahụ na-enye gị nyocha 25 kwa ọnwa.
Chọta adreesị ozi-e na Hunter
Atụmatụ akwụ ụgwọ na-amalite na euro 49 ma gụnye ọtụtụ nchọta yana njirimara adịchaghị dịka nyocha karịa na nbudata CSV.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ngwaọrụ dị na ndepụta a na-enye gị ohere inyocha ndị na-ege gị ntị, Sparktoro na-adaberekwa na nyocha ndị na-ege ntị iji chọta ndị na-eme ihe dị mkpa. Nke pụtara na ị ga-ebu ụzọ chọta ndị na-ege ntị site na Sparktoro wee jiri ya chọpụta ka ị ga-esi ruo ha.
Ozugbo ịmepere ngwá ọrụ ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta ndị na-ege ntị site na ide:
ihe ha na-ekwukarị;
Kedu okwu ha na-eji na profaịlụ ha;
Kedu weebụsaịtị ha na-aga;
na hashtags ha na-eji.
Chee echiche, naanị ihe achọrọ ka ị zaa otu n'ime ajụjụ ndị a ka ịchọta ndị na-ege gị ntị. A ga-aza ndị ọzọ n'ime ha na nsonaazụ Sparktoro - yana akaụntụ mgbasa ozi mgbasa ozi ndị na-ege gị ntị na-eso.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji Sparktoro maka nyocha mmetụta, isi ihe ị ga-elekwasị anya ga-abụ nsonaazụ na-egosi ihe ndị na-ege gị ntị na-eso, nleta, na itinye aka na ya. Sparktoro kewara nsonaazụ ndị a ụzọ anọ:
Ọtụtụ gbasoro akaụntụ mgbasa ozi ọha
Akaụntụ mmekọrịta na-erute obere mana ntinye aka dị elu n'etiti ndị na-ege gị ntị
Webụsaịtị ndị a kacha eleta
Weebụsaịtị nwere obere okporo ụzọ mana itinye aka dị elu
Ndepụta a na-enyere gị aka ịhụ ndị kacha ewu ewu na niche a kamakwa ndị na-emekọrịta ihe na ndị mmadụ, na-egosi gị ndị micro-influencers na-arụ ọrụ ma na-arụsi ọrụ ike.
Sparktoro na-egosikwa gị ihe ọdịnaya ndị na-ege gị ntị na-eri n'ịntanetị: pọdkastị ha na-ege ntị, ihe ndekọ akụkọ ha na-eso, yana ọwa YouTube ha na-ekiri.
Ị ga-anwale Sparktoro ma ọ bụrụ:
Ị maghị ndị ndị na-ege gị ntị ka bụ ma ọ bụ chọọ ịchọta nke ọhụrụ
Ịchọrọ ịghọta ka ị ga-esi ruo ndị na-ege gị ntị site na ọdịnaya ịntanetị
Atụmatụ n'efu na-enye nyocha ise kwa ọnwa, agbanyeghị, atụmatụ akwụ ụgwọ na-agbakwunye akaụntụ na ọwa ndị ọzọ nwere mmetụta iji ruo ndị na-ege gị ntị. Ọnụ ahịa na-amalite na $38.
Followerwonk bụ ngwa Twitter na-enye nyocha ndị na-ege ntị dị iche iche maka ikpo okwu. Ọ na-enyekwa njirimara nyocha nke influencer n'ụzọ ezi uche dị na ya na-elekwasị anya na ndị na-emetụta Twitter.
Ị nwere ike iji ya gwuo miri emi na nyocha Twitter gị. Ị nwere ike ịchọ Twitter bios, jikọọ na influencers ma ọ bụ Fans, na-akụda ha site na ọnọdụ, ikike, ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ, wdg Ọ na-enye onye ọrụ Twitter ọ bụla ọkwa mmekọrịta dabere na ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ na ntinye aka ha nwere. Ị nwere ike iji akara ndị a iji chọpụta ka onye mmetụta na-ewu ewu.
Agbanyeghị, achọghị naanị na akaụntụ ụfọdụ. Ị nwere ike ịchọ okwu isiokwu (ụdị gị, dịka ọmụmaatụ), na Followerwonk ga-ewepụta ndepụta akaụntụ Twitter niile nwere okwu ahụ na bios ha.
Ị ga-anwale Followerwonk ma ọ bụrụ:
Isi ikpo okwu ndị na-ege gị ntị bụ Twitter
Debanye aha maka Followerwonk n'efu
Ngwá ọrụ ahụ bụ n'efu. Enwere ụdị akwụ ụgwọ nwere atụmatụ ndị ọzọ, ọnụ ahịa na-amalite na $29.
Ọ bụrụ na ọ ga-akara gị mma ilekwasị anya na ikpo okwu ọdịnala maka ndị okike n'ịntanetị, nke a bụ ngwa maka gị.
Site n'ikike iji isi okwu chọọ site na Instagram na YouTube, NinjaOutreach ga-ahụ ndị na-eme ihe nwere nnukwu ọpịpị, mmekọrịta na okporo ụzọ.
Dị nnọọ ka Upfluence, NinjaOutreach na-arụ ọrụ bụ isi dị ka nchekwa data nke YouTube na Instagram mmetụta. Ọ na-ejide ihe karịrị nde 78 mgbasa ozi mgbasa ozi na profaịlụ blọgụ ị nwere ike ịkpọtụrụ ma nyere aka rụọ ọrụ mgbasa ozi gị iji kwalite mmekorita gị na ndị na-eme ihe.
Ikpokoro ahụ na-eme ka usoro mgbasa ozi dịkwuo mfe ebe ọ na-enye kọntaktị email nke ndị niile na-eme ihe na nchekwa data ya ma na-enye gị ohere ịmepụta CRM nke gị. Ị nwere ike soro ndị otu gị kekọrịta ohere ahụ wee soro akụkọ mkparịta ụka iji jide n'aka na onye ọ bụla nọ na ịmara.
Ị ga-anwale NinjaOutreach ma ọ bụrụ:
Ịchọrọ ikpo okwu nke ga-eme ka ma nyocha na mgbasa ozi nke mgbasa ozi mmetụta
Ị na-elekwasị anya mkpọsa mmetụta gị na YouTube na Instagram
Debanye aha maka NinjaOutreach
Enwere nnwale efu dị (ozi kaadị achọrọ). Atụmatụ abụọ a na-eri $389 na $649 kwa ọnwa ma dị iche site na ọnụọgụ ozi ịntanetị dị, akaụntụ otu, na kọntaktị.
Malite na mgbasa ozi mmetụta taa
Dị ka ị na-ahụ, ngwá ọrụ mgbasa ozi influencer na-enye ụdị dị iche iche maka onye ọ bụla na-ere ahịa, n'agbanyeghị mmefu ego gị ma ọ bụ ihe mgbaru ọsọ gị. M na-agba gị ume ka ị gbalịa ụdị ngwá ọrụ n'efu nke dọtara anya gị wee hụ ihe ha nwere ike ime maka ika gị. Opekempe, ị nwere ike ịmalite iso ndị na-eme ihe ị chọpụtara ka ị nwee ike ịmalite ịkparịta ụka n'Ịntanet na ha, ịghọta niche ha na ilekwasị anya, na ikekwe na-agakwuru ha maka ịkwalite ngwaahịa na ọrụ gị.
ngosi: Martech Zone agbakwunyela njikọ mmekọ na akụkọ a.
Tags: egwubuzzsumondị na-emetụta ecommercendị na-emetụta Facebookchọta ndị na-ede blọgụchọta ụdịchọta ụlọ ọrụchọta adreesị ozi-echọta ndị na-eme ihechọta ndị na -emetụta instagramchọta ndi oru nta akukochọta ndị nta akụkọchọta ndị na -eme TikTokchọta twitch influencershunterdinta.ioinfluencerahịa ahịangwaọrụ nyocha ahịa influencerNnyocha Mgbanweinfluencer research ngwa ahịandị na - eme ihe nkirimicro-influencernano-mmetụtandị mgbasa ozi na-elekọta mmadụndị na-eme ihe nkirituwichindị na -eme mkpọtụndị na-emetụta twitternkwalitendị na-emetụta youtube